Usoro nke Ọrụ | Martech Zone
Mgbe ị na-eji saịtị a, ị kwenyere na ị ghọtara iwu anyị ma kwenye ha.
Agaghị aza saịtị a maka ọrụ ọdịnaya na onye ọrụ nke saịtị mepụtara.
Kwenyere ma kwenye na ọdịnaya niile (ederede na mgbasa ozi) n'ihu ọha ma ọ bụ na-ebunye onwe ha bụ naanị ọrụ nke onye ọ bụla biputere ọdịnaya ahụ, ọ bụghị saịtị a.
Saịtị a nwere ikike ịgbakwunye, wepu ma ọ bụ gbanwee atụmatụ ọ bụla na saịtị ahụ n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa ma ọ bụ ụgwọ.
Na ahụta maka omume gị n'ịntanetị yana nzuzo nke ozi gị.
Saịtị a nwere ikike iwepu ọdịnaya ndị na-emetụta ndị ọbịa ndị ọzọ banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, ịkpa ókè agbụrụ, ịkpọasị, ịkpọasị, okwu rere ure, ma ọ bụ nke na-abaghị uru ọ bụla.
Saịtị a nwere ikike iwepu mkparita ụka na adịghị mma.
A naghị anabata spam na nkwalite onwe onye na saịtị a ma wepụ ya.
You nweghị ike iji saịtị a kesaa ma ọ bụ biputere ihe megidere iwu ma ọ bụ ozi ma ọ bụ biputere na saịtị ndị na-eme ihe ndị ahụ.
Ọ bụ ọrụ gị ịlele faịlụ ọ bụla ebudatara maka nje, trojans, wdg.
You na-ahụ maka omume gị na ọrụ gị na saịtị a, anyị nwere ike igbochi ndị ọrụ na-emebi Usoro Ọrụ anyị.
Are na-ahụ maka ichebe kọmputa gị. Anyị na-akwado ịwụnye mmemme nchedo nje a pụrụ ịdabere na ya.
Saịtị a jiri ọtụtụ nchịkọta ngwaọrụ iji nyochaa ndị ọbịa na okporo ụzọ. A na-eji ozi a iji melite ọdịnaya nke saịtị ahụ.
Ihe niile enyere na blọgụ a bụ naanị maka ebumnuche ozi. Onye nwe blọọgụ a anaghị egosi ụdị nzizi ma ọ bụ izu ezu nke ozi ọ bụla na saịtị a ma ọ bụ ịchọta site na isoro njikọ ọ bụla na saịtị a. Onye nwe ya agaghị aza ajụjụ maka njehie ọ bụla ma ọ bụ nwepu na ozi a ma ọ bụ maka nnweta ozi a. Onye nwe ya agaghị aza ajụjụ maka mfu ọ bụla, mmerụ ahụ, ma ọ bụ mmebi sitere na ngosipụta ma ọ bụ ojiji nke ozi a. Usoro na ọnọdụ ojiji a ga-agbanwe n'oge ọ bụla na enweghị ọkwa.